सकियो सचीवालयको बैठक , भए यस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु ,यस्ता छ्न निर्णयहरु…हेर्नुहोस।
काठमाडौ : सत्तारुढ दल नेपाल क,म्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बै,ठक सम्पन्न भएको छ ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकले आज विशेष गरी ७ वटा नि,र्णयहरु गरेको छ । पार्टी भित्रको वि,वाद स,माधान तथा सरकारलाई जनमुखी बनाउँदै लैजाने
विषयमा भएको छलफल प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव अनुसार नै काम भएको पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । का,र्यदलको प्रतिवेदन आएपछि मात्र मन्त्रीमण्डल परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल हुने समेत उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
सचिवालयको बै,ठकले गरेको नि,र्णयहरु:१. पार्टी र सरकार भित्र देखापरेको स,मस्याको स,माधान र सं,कटलाई स,माधान गर्ने गरी टुङ्गोमा पुर्याउने,
२. अध्यक्षद्वयद्वारा गठित का,र्यदललाई सकारात्मक रुपमा लिँदै बै,धानिकता दिएको वा का,र्यदललाई अनुमोदन,३. राष्ट्रका लागि पार्टी र सरकार सञ्चालनका सवालमा कार्यदलले दिएको सुझावालई प्रभावकारी ढं,गले काम गर्न दृ,ढताका साथ स,हयोग गर्ने,
४. पार्टीको सं,कट नि,वारणको निम्ती दुई अध्यक्षले सहयोगको निम्ती का,र्यदल ग,ठन गर्नु उपयुक्त भएको र कार्यदलले दिएको सुझावसहित छिटोभन्दा छिटो स,मस्या स,माधान गर्ने,
५. कार्यदलले दिएको सुझावलाई आधार मानि पार्टी एकताको महाधिवेशनमा जाने गरी तयारी गर्ने,६. केही दिनभित्रमा नै स,मस्या स,माधान हुने,७.कार्यदलले प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयसमक्ष प्रस्तुत गर्ने र बैठकमा आउनेछ।